Nahafaty olona indray ny lalam-pirenena fahafito, afakomaly. Maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana tamin’izany ny zazakely iray raha hiditra an’Ambatofitorahana iny ny fiara. Nivadika ny fiara ka nivoaka ny arabe. Vokany, voatsindrin’ny varavarana aorian’ny mpamily ilay zazakely ka maty tsy tra-drano. Nisy amin’ireo mpandeha ihany koa ny naratra, saingy tsy nisy natahorana ny ainy. Misokatra ny fanadihadiana.
Lehilahy iray nahatraran’ny polisin’ny Fip Toliara basy vita gasy iray sy balana Kalachnikov roa tsy ara-dalàna teo akaikin’ny trano fandraisam-bahiny iray ao an-toerana, tokony ho tamin’ny 4 ora sy sasany hariva. Naneho fihetsika hafahafa amin’ny mpitandro filaminana izy ka nahiana ho olon-dratsy. Rehefa nosaivana, tratra teny amin’ny basy poleta iray sy bala niisa roa.
Vehivavy iray fantatra amin’ny anarana hoe Tojo Zafimarovavy Fracia no karohin’ny polisy fatratra amin’izao fotoana noho ny fivadiham-pitokisana nataony tamin’ny mpampiasa azy. Lasan’io olon-dratsy io ny entana tao amin’ny orinasa iray ao Toamasina ka tsy hita izy hatramin’izao fotoana izao.